Ngibhekisa kanjani ngaseZulwini lami? - Mytika Speak
Ikhaya / Imizwa, okhiye nokubonakaliswa / Ngibhekisa kanjani ezulwini lami?
Okokuqala nokubaluleke kakhulu, umuntu kufanele akholelwe ukuthi kukhona ifayela le- Izulu futhi ubone ukuthi kungaphezu komqondo. Kungokoqobo. Abantu abaningi bakuthola kunzima ukukukholelwa ngoba kuyaqabukela bebona abanye abantu bephila esimweni sasezulwini. Uma uqalaza, bangaki abantu obaziyo abangabangempela happy nokuqukethwe?
Labo abalapha ukusabalalisa ukukhanya azibekiwe zonke endaweni eyodwa. Zisatshalaliswa ukuze zikwazi ukusabalalisa ukukhanya ezigabeni ezahlukahlukene zobumnyama. Inhloso yabo akukhona ukuba nabangane abanomqondo ofanayo. Uma bekunjalo, konke abasebenza ngokukhanya bekungahlanganiswa ndawonye kufane nelanga, kepha ilanga lingakhanyisa uhlangothi olulodwa lomhlaba ngasikhathi.
Abanye abantu bakholelwa ukuthi iZulu yindawo eyodwa lapho kukhona wonke umuntu khona. Kungaphezulu kwendawo yomuntu ngamunye ebizelwe umuntu ngamunye. Isibonelo, uma uhlobo lomuntu oyedwa lwepharadesi lunama-pelican futhi omunye engazithandi izinyoni, khona-ke omunye walaba ababili ngeke abhekane neZulu labo eliphelele ngenkathi besendaweni yonke efanayo. Ngalesi sizathu, kunemininingwane eminingi okufanele uyinake.
Abantu baneZulu labo kepha bangakhetha ukubahlanganisa nabanye. Ngaphambi kokuhlanganisa, umuntu kufanele ahlole ngokucophelela ukuthi inguqulo yomunye umuntu injani ngoba ingashintsha eyayo ngendlela engabathinta kahle noma kabi. Ukube ubungahlanganisa wonke umuntu ndawonye, ​​nezinguqulo zabo ezahlukahlukene zokuthi yini injabulo yabo, ungazithola usendaweni yonke ebukeka ifana ngendlela emangalisayo Emhlabeni njengoba abantu abaningi bekwazi.
Ukuklama iZulu lakho kubandakanya ukuthola impahla enhle kakhulu, njengoba kunqunywa ngumqondo wakho ngamunye, nokuyiveza ibe yisithombe ohlala kuso. Zama ukususa amandla abo bonke abantu bese uzibuze ukuthi iZulu lakho uqobo lizoba yini. Vumela imizwa yakho ikuqondise futhi ungabheki omunye umuntu. Besizobukeka kanjani isibhakabhaka? Zaziziphatha kanjani izilwane? Impilo yakho yansuku zonke ibizobukeka kanjani? Abantu, ngokuvamile, basebenzisana kanjani? Sinjani isimo sezulu ngaphandle? Ingabe iyashintsha noma ihlala ingaguquguquki? Yenza lokhu kuzo zonke izici zempilo futhi wazi ukuthi kungenzeka ngokuphelele ukuthi ube nakho okungu-100%. Uma ufuna abanye eZulwini lakho, ungahlala uhlanganisa ezabo nezakho kepha ugweme ukuzidela, ngaphandle kokuthi ukunikela kuyingxenye yokuphelela kwakho.
Izulu lami libalele impela,
ihlelwe ngesibhakabhaka esiwolintshi nesibhakabhaka.
Ukuvakashelwa ngamafu kuza ngokuthula,
ubuhle obugqoke izimpunga abuphikisiwe.
Isimo sezulu siphelele ngempela,
Lapho ngiyidinga ukufudumala,
ithumela umoya omnandi.
Uma lina ngibona uthingo,
imibala ejabulayo ngokumamatheka.
Amasiko ehlukene ayafana,
konke kuhlanganiswe kahle futhi kwenziwe isitayela samahhala.
Abantu ababuyiselwe emuva banodwi,
kukhanya imibhoshongo emikhulu ekhanyayo.
Izingane azihlangabezananga nokwethuka,
ubumsulwa abusoze buphela.
Izilwane zingabangane bethu bonke,
amaqabane endleleni esabelana ngayo.
Omakhelwane badlala izingoma ezinomqondo ofanayo,
umculo manje ugcwalisa umoya.
Amathegiukuqonda izulu izulu emhlabeni ukukhula komuntu siqu inkondlo izinkondlo ingokomoya